Iindaba - Isitshixo semoto sinemisebenzi emine efihliweyo, sinokusindisa ubomi kumzuzu kaxakeka
Isitshixo semoto sinemisebenzi emine efihliweyo, sinokusindisa ubomi kumzuzu kaxakeka
Nje ousiba ucango lwekhabhathi
Uninzi lweemoto lunokuvula kuphela ucango lwekhabhathi xa ucofa iqhosha elikude, kwaye emva kokulicofa kabini, zonke iingcango zinokuvulwa.
Abanye abaqhubi bayayithatha imoto kwindawo yokupaka ekude, Ukuba uvula nje umnyango wecab, banokuthintela abantu ababi ukuba bangene emotweni kwisitulo esingasemva kwesithuthi okanye kumnyango wesihlalo sabakhweli sangaphambili. Ke, lo msebenzi ugcina ubomi uxabiseke ngokwenene, andithi, ngakumbi abaqhubi ababhinqileyo?
Vala ifestile yemoto
Emva kokuba imoto imisiwe, cima i-injini ngqo, emva koko tsala i-handbrake ukwehla emotweni uhambe. Kodwa ngequbuliso ujonge ngasemva, wafumanisa ukuba ulibale ukuvala ifestile okanye i-sunroof. Uza kwenza ntoni ngeli xesha? Kufuneka ibuyele emotweni, uvule iswitshi, ucime iifestile ne sunroof, emva koko utshixe imoto kwakhona. Ngaba kunzima?
Ngapha koko, uninzi lwabantu alwazi, emva kokuba imoto icinyiwe, ukuba nje ucofa ubambe iqhosha lokutshixa lesitshixo sokulawula okukude, iglasi kunye ne-sunroof yemoto ziya kuvala ngokuzenzekelayo! Kwezinye iimoto, ukuba nje umsebenzi wokuvala kude usetyenziswa, zonke iifestile ziya kuphakama ngokuzenzekelayo zize zivale. Lo msebenzi ulunge ngokwenyani, yivangeli kaMarta, haha.
Khangela i imoto ngokukhawuleza
Ukuba awukwazi ukufumana imoto yakho ngokukhawuleza, iqhosha lemoto linamaqhosha anokukunceda. Umzekelo, xa usiya kwiivenkile ezinkulu uze upake imoto yakho kwindawo yokupaka ephantsi komhlaba, kufuneka ukhangele kwihlabathi liphela xa ubuya uzokuyithatha. Sukoyika ngeli xesha. Ukuba ufuna ukufumana imoto yakho, kufuneka ucofe iqhosha elibomvu kwisitshixo semoto ukuze wenze isandi. Oku kuyakwenza lula ukufumana imoto yakho, kodwa ulumke, Sukusebenzisa lo msebenzi ngexesha lokuvela, kuba iya kuchaphazela abanye xa uyisebenzisa.
Iimodeli ezininzi zolawulo olukude zineqhosha lokukunceda uvule umboko ngokuzenzekelayo. Cofa ixesha elide iqhosha lokuvula (kwezinye iimoto, cofa kabini), umboko uza kuvulwa ngokuzenzekelayo. Ukuba uphuma nje evenkileni kwaye uphethe iibhegi ezinkulu esandleni sakho, ziya kusebenza ngeli xesha, kwaye inokubonelela ngokulula kakhulu nangokubamba kube kanye.
Ixesha lokuposa: Aug-17-2020